အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်း အရင်းကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ကြူကြူသင်း – Suehninsi
ဟာသ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဘဝနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သရုပ်ဆောင် ကြူကြူသင်းကတော့ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ယခုထက်တိုင်ရရှိနေသူတစ်ဦးပါ။ဒီလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပေမယ့် သူမအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ကွဲခံရတဲ့ အကြောင်းကို မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာ အခုလို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပါ။ အချစ်ရေးဆိုတာမျိုးက ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ ကိုယ်အချစ်တွေပေးတယ် သူတို့ မယူတတ်ဘူးပေါ့ ကိုယ်လည်းမယူနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုက
ဒီလိုကံပါလာလို့ ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲ နောက်ပိုင်းကျတွေးတယ် ပထမတော့ ငါ့ကျမှ ဒီလိုဖြစ်ရလားဆိုပြီး အရမ်းဝမ်းနည်းတာ အရမ်းလည်းရှက်တယ် အမဘဝမှာ ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ကိုမထင်ခဲ့ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမေတို့ဆုံးပြီးမှ အမက အိမ်ထောင်ပြုတာကိုး အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါကျတော့ ဒီဟာကြီးကိုရှက်တာပေါ့နော် အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတာကို ရှက်တာပေါ့နော် ကိုယ်အိမ်ထောင်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူ့ကိုမပြောခဲ့ဘူး သုံးလေးနှစ်နေတော့မှ သူတို့သိကြတယ် ၃ ၄ နှစ်တောင်မကပါဘူး ၅ နှစ်လောက်နေမှသိတာ သူတို့က ကိုယ့်အမျိုးသားနာမည်မေးရင် ဘယ်မှာလဲ ဆို ဟိုမှာ လိုက်မသွားဘူးလားဆို ဟိုတလောတုန်းက
ပြန်လာတာ အဲ့လိုမျိုးပဲ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုမေးတတ်တဲ့လူတွေရှေ့မှာ အမဘယ်တော့မှ မနေတော့ဘူး အဲ့လူတွေကိုရှောင်နေတယ် သူတို့နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာနေတယ် သူတို့နဲ့တန်းတူရီချင်ပေမယ့် အမမရီနိုင်ဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမတို့က မိန်းမသားတွေလေ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမကမိန်းမမြတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဘွဲ့ဆိုတာလည်း အမ မယူခဲ့ရဘူး မရခဲ့ဘူး ဒီလောကထဲကို အမဝင်တယ် ဘွဲ့မရဘူး အိမ်ထောင်ကျတယ် အဖေတို့ အမေတို့မရှိတော့ တင့်တင့်တယ်တယ် မင်္ဂလာပွဲဆိုတာ အမ မရှိခဲ့ဘူး မင်္ဂလာမဆောင်ခဲ့ဘူး အမတို့ ဒီတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးယူထားတာ လွယ်လွယ်ရလို့ လွယ်လွယ်ကွဲသွားတဲ့ သဘောပေါ့နော် အဲ့ဒီတော့ မိန်းမမြတ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့
မိန်းမတစ်ယောက် မိန်းမကောင်းတော့ ဖြစ်ချင်တယ် အဲ့ဒီအတွက် နောက်ခြေလှမ်းဆိုတာ အမမှာမရှိဘူး နောက်ခြေလှမ်းဘယ်သူ့ကိုမှ အမမလှမ်းထားဘူး တစ်ခုလပ်ဆိုတာမျိုးက လူတွေကအမြင်တစ်မျိုးရှိကြတယ်လေ အမသိတာပေါ့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ပဲ ဒါရိုက်တာတွေကသင်ပေးခဲ့တာပဲ နင့်ကိုဘယ်လိုမျက်လုံးမျိုးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် နင်ကဘယ်လိုကြည့်လိုက်ဆိုတာ သိတာပဲ ဒါပေမယ့်အမ လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုလည်းသိတယ် လူတွေရဲ့ အပြောကိုလည်း သိတယ် ခပ်ပြုံးပြုံးပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လေ
ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ကလူတွေကလည်းသိသွားတော့ ငါတို့လည်းမသိရဘူး ဒီကောင်မကြီး ကြိတ်ခံနေတယ်လို့ ပြောကြတယ် ကြိတ်မခံလို့မှမရတာ အခုချိန်မှာမေးလို့ရှိရင် အမက ရီရီမောမောနဲ့ပြောနိုင်တယ် ဟိုတုန်းကမပြောနိုင်ဘူး အဲ့ဒီအချိန်ကို အမ ပြန်မသွားချင်ဘူး လို့ ပြောပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြူကြူသင်းကတော့ သူမ အိမ်ထောင်ကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. ကြူကြူသင်းတစ်ယောက် အေးချမ်းစွာနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
ဟာသ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျဘဝနဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ သရုပျဆောငျ ကွူကွူသငျးကတော့ ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးကို ယခုထကျတိုငျရရှိနသေူတဈဦးပါ။ဒီလို ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပမေယျ့ သူမအနနေဲ့ အိမျထောငျရေးကံမကောငျးခဲ့ပဲ အိမျထောငျကှဲခံရတဲ့ အကွောငျးကို မီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာ အခုလို ရငျဖှငျ့လာခဲ့တာပါ။ အခဈြရေးဆိုတာမြိုးက ကိုယျကွုံတှခေဲ့ရတယျလေ ကိုယျအခဈြတှပေေးတယျ သူတို့ မယူတတျဘူးပေါ့ ကိုယျလညျးမယူနိုငျခဲ့ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါမြိုးပေါ့ ကိုယျ့ရဲ့ကံကိုက
ဒီလိုကံပါလာလို့ ဒီလိုပဲဖွဈတယျလို့ပဲ နောကျပိုငျးကတြှေးတယျ ပထမတော့ ငါ့ကမြှ ဒီလိုဖွဈရလားဆိုပွီး အရမျးဝမျးနညျးတာ အရမျးလညျးရှကျတယျ အမဘဝမှာ ဒီလိုဖွဈလိမျ့မယျလို့ ထငျကိုမထငျခဲ့ဘူး ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အမတေို့ဆုံးပွီးမှ အမက အိမျထောငျပွုတာကိုး အသကျကွီးမှ အိမျထောငျပွုတဲ့အခါကတြော့ ဒီဟာကွီးကိုရှကျတာပေါ့နျော အိမျထောငျကှဲတယျဆိုတာကို ရှကျတာပေါ့နျော ကိုယျအိမျထောငျပကျြသှားတယျဆိုတာကို ဘယျသူ့ကိုမပွောခဲ့ဘူး သုံးလေးနှဈနတေော့မှ သူတို့သိကွတယျ ၃ ၄ နှဈတောငျမကပါဘူး ၅ နှဈလောကျနမှေသိတာ သူတို့က ကိုယျ့အမြိုးသားနာမညျမေးရငျ ဘယျမှာလဲ ဆို ဟိုမှာ လိုကျမသှားဘူးလားဆို ဟိုတလောတုနျးက
ပွနျလာတာ အဲ့လိုမြိုးပဲ ဒါပမေယျ့အဲ့လိုမေးတတျတဲ့လူတှရှေမှေ့ာ အမဘယျတော့မှ မနတေော့ဘူး အဲ့လူတှကေိုရှောငျနတေယျ သူတို့နဲ့ခပျလှမျးလှမျးမှာနတေယျ သူတို့နဲ့တနျးတူရီခငျြပမေယျ့ အမမရီနိုငျဘူး ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အမတို့က မိနျးမသားတှလေေ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ အမကမိနျးမမွတျမဖွဈခဲ့ဘူး ဘှဲ့ဆိုတာလညျး အမ မယူခဲ့ရဘူး မရခဲ့ဘူး ဒီလောကထဲကို အမဝငျတယျ ဘှဲ့မရဘူး အိမျထောငျကတြယျ အဖတေို့ အမတေို့မရှိတော့ တငျ့တငျ့တယျတယျ မင်ျဂလာပှဲဆိုတာ အမ မရှိခဲ့ဘူး မင်ျဂလာမဆောငျခဲ့ဘူး အမတို့ ဒီတိုငျးလကျမှတျထိုးပွီးယူထားတာ လှယျလှယျရလို့ လှယျလှယျကှဲသှားတဲ့ သဘောပေါ့နျော အဲ့ဒီတော့ မိနျးမမွတျမဖွဈခဲ့တဲ့
မိနျးမတဈယောကျ မိနျးမကောငျးတော့ ဖွဈခငျြတယျ အဲ့ဒီအတှကျ နောကျခွလှေမျးဆိုတာ အမမှာမရှိဘူး နောကျခွလှေမျးဘယျသူ့ကိုမှ အမမလှမျးထားဘူး တဈခုလပျဆိုတာမြိုးက လူတှကေအမွငျတဈမြိုးရှိကွတယျလေ အမသိတာပေါ့ အနုပညာသမားတဈယောကျပဲ ဒါရိုကျတာတှကေသငျပေးခဲ့တာပဲ နငျ့ကိုဘယျလိုမကျြလုံးမြိုးလေးနဲ့ကွညျ့လိုကျရငျ နငျကဘယျလိုကွညျ့လိုကျဆိုတာ သိတာပဲ ဒါပမေယျ့အမ လူတှရေဲ့မကျြလုံးကိုလညျးသိတယျ လူတှရေဲ့ အပွောကိုလညျး သိတယျ ခပျပွုံးပွုံးပဲနနေိုငျအောငျကွိုးစားခဲ့တယျလေ
ရုပျရှငျအဖှဲ့ကလူတှကေလညျးသိသှားတော့ ငါတို့လညျးမသိရဘူး ဒီကောငျမကွီး ကွိတျခံနတေယျလို့ ပွောကွတယျ ကွိတျမခံလို့မှမရတာ အခုခြိနျမှာမေးလို့ရှိရငျ အမက ရီရီမောမောနဲ့ပွောနိုငျတယျ ဟိုတုနျးကမပွောနိုငျဘူး အဲ့ဒီအခြိနျကို အမ ပွနျမသှားခငျြဘူး လို့ ပွောပွသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျကွူကွူသငျးကတော့ သူမ အိမျထောငျကှဲသှားရတဲ့ အကွောငျးကို ရငျဖှငျ့လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…. ကွူကွူသငျးတဈယောကျ အေးခမျြးစှာနဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနိုငျပါစကွေောငျး ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျနျော။